Dolinas - ၎င်းတို့သည် အဘယ်အရာ၊ ဖွဲ့စည်းမှု၊ လက္ခဏာများနှင့် အခြားအရာများ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 17/11/2021 10:00 | ဘူမိဗေဒ
ဘူမိဗေဒတွင် အမျိုးမျိုးသော ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်း၏ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဇာစ်မြစ်ရှိသည်။ တယောက်က တွင်းများ. အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ကို သတိမထားမိရင် အန္တရာယ်များတဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုပါ။ ၎င်းမှာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဘူမိဗေဒ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှု အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ချောက်အလယ်ဗဟို သို့မဟုတ် အခြားနေရာများတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ sinkholes များ၊ ၎င်းတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံများအကြောင်းသိလိုသမျှကိုပြောပြရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆောင်းပါးကိုဆက်ကပ်ပါမည်။
3 တွင်းများ ဥပမာများ
4 ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ဘူမိဗေဒ
တွင်းများ သည် မြေအောက်ရေတွင်းများဖြစ်ပြီး ရေကန်ဧရိယာတွင် တည်ရှိသော်လည်း ပြင်ပရေနုတ်မြောင်းစနစ်မရှိသောကြောင့် ရေသည် မြေအောက်နေရာ သို့မဟုတ် ကတ္တရာကိုယ်တိုင် ဖြတ်သန်းသွားသော အရာအားလုံးကို တိုက်စားသွားပါသည်။
အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိသည်။ wild အမျိုးအစား၊ ကာဗာအမျိုးအစားနှင့် ပြိုကျအမျိုးအစား. မြေကြီးပေါ်တွင် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အသီးအရွက်များ မရှိတော့သည့်အခါ သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်သောကြောင့် ရေသည် မျက်နှာပြင်တွင် ပျော်သွားကာ နောက်ဆုံးတွင် ရေတွင်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ အဖုံးသည် သဲများရှိနေသောအခါ၊ ရေသည် အရာဝတ္တုအတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်သွားသောအခါတွင် ရေသည် အောက်ဘက်သို့ စီးဆင်းသွားသည်။ ပြိုကျသည့်အမျိုးအစားသည် အန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ အပေါ်ဆုံးအလွှာသည် နောက်ဆုံးတွင် ပြိုကွဲသွားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာခပ်သိမ်းသည် ရေဖြင့်တူးထားသော အပေါက်ထဲသို့ အနည်အနှစ်များကို မသိလိုက်ဘဲ ပြိုကျသွားသောကြောင့် အန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်သည်။
အနှစ်သာရအားဖြင့်၊ ၎င်း၏အသွင်အပြင်သည် သဘာဝအကြောင်းတရားများ၊ လူ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ရေတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ အများအားဖြင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းမှ ရေများ သို့မဟုတ် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နိမ့်ကျမှုကြောင့် တည်ရှိသောရေများသည် မြေဆီလွှာ၏ အောက်ခြေကျောက်လွှာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် နောက်ဆုံးတွင် ထိခိုက်လာမည်ဖြစ်သည်။ အချို့သော မျက်နှာပြင်မဟုတ်သော အလွှာများကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။. ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ နစ်မြုပ်မှုကို ဦးတည်စေတဲ့ အရာနှစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ နင်းမိသော မြေအောက် လှိုဏ်ဂူတစ်ခုသည် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မသိသော်လည်း၊ ၎င်းသည် မျက်နှာကျက်ကို သက်ရောက်မှုရှိစေပါသည်။ ၎င်းသည် ပြိုကျပြီး နောက်ဆုံးတွင် မျက်နှာပြင်၏ တိုက်စားမှု ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒုတိယအခြေအနေတွင် ဂူများမရှိ၍ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ရေ၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် မြေဆီလွှာကို ခိုင်မြဲစွာ ထိန်းထားသည့် ကျောက်ကို ပျော်ဝင်စေသည်။ပြိုကျစေပြီး မြေကြီးတွင်းနက်ကြီးများကို ဖန်တီးပေးသည်။
အာဏာပိုင်များက သတိပေးပါက ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အားနည်းချက်များကို သတိပေးသည့် လမ်းဆိုင်းဘုတ်များ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ မဟုတ်ပါက အက်ကြောင်းများနှင့် ပေါက်နေသော အမှတ်အသား အနည်းငယ်ရှိနိုင်သောကြောင့် မြေပြင်ကို အာရုံစိုက်ပါ။ အခြားနည်းလမ်းမှာ အက်ကွဲကြောင်းအနီးတွင် ပေါက်နေသော အပင်များကို တွေ့ပါက၊ ဆိုလိုတာက အောက်ခြေမှာ ရေရှိတယ်။
အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ရေအောက်တွင်းတွေ အများကြီးရှိပြီး လည်ပတ်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်လည်း သွားလည်လို့ရပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို "အပြာရောင်တွင်းများ" ဟုခေါ်ပြီး ကြီးမားသောနေရာများကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အီတလီရှိ Pozzo del Mero သည် မီတာ 400 နီးပါးနက်သည်။ ဘဟားမားစ်ရှိ Blue Hole of Dean သည် မီတာ ၂၀၀ ကျော် နစ်မြုပ်ခဲ့သည်။.
တွင်းများရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ အန္တရာယ်များပါတယ်။ စင်စစ်၊ ၎င်းသည် ဖြစ်ပေါ်လာသော တွင်းများ အမျိုးအစားပေါ်တွင်မူတည်သော်လည်း မြို့ကြီးများတွင် ပြိုကျသည်အထိ တိုက်စားတတ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် နောက်ဆုံးတွင် မသင်္ကာဖွယ် ဖြတ်သန်းသွားသူများ သေဆုံးခြင်းသို့ ဦးတည်သွားစေသည်မှာ သေချာပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ကားများစွာ မြေပြင်ပေါ်သို့ ပြုတ်ကျသနည်း။. ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးမှာ နယ်မြေမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသောကြောင့် တွင်းနစ်မြှုပ်သွားသော လူအများအပြား၏ အလောင်းများကို မည်သည့်အခါမှ ပြန်လည်ရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းလှသည်။
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံရှိ Yucatan ကျွန်းဆွယ်၏ ထုံးကျောက်များကို ပင်လယ်သေကို ဝန်းရံထားသည့် ကျောက်ဆားများသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တွင်းများ သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ အခြားသော နမူနာကောင်းများဖြစ်သည်။ စပိန်တွင် ၎င်း၏အကျော်ကြားဆုံးနှင့် အထင်ကြီးစရာကောင်းသော သဘာဝကျွံတွင်းများထဲမှ တစ်ခုမှာ Cuenca ပြည်နယ်ရှိ Torcas del Palancar ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Castilla-La Mancha ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအသိုက်အဝန်းတွင် မယုံနိုင်လောက်အောင် ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ မြေဆီလွှာအားလုံးသည် အညီအမျှ နစ်မြုပ်နိုင်ခြေ မရှိပါ။ တကယ်တော့၊ ဒိုလီနာ ဟူသော စကားလုံး၏ ဗျုပ္ပတ်ဗေဒသည် စလိုဗေးနီးယန်းဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာကာ၊ အထူးသဖြင့် ကာဆိုဒေသတွင် ၎င်းတို့ကို ဤဒေသများတွင် ရှာရလွယ်ကူသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ ထုံးကျောက် သို့မဟုတ် ဂျစ်ပဆမ်ကဲ့သို့ သီးသန့်ကျောက်များ အစုလိုက်အစီအရီဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော မြေအမျိုးအစားကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ရေနှင့်ထိတွေ့သောအခါတွင် ပျော်ဝင်သည့်သတ္တုဓာတ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤကယ်ဆယ်ရေးအမျိုးအစားကို karst relief ဟုခေါ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ခံစားနိုင်သော စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော သဘာဝရှုခင်းကို ချန်ထားသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့ တွင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စုပ်ခွက်သည် မိုးရေနှင့် မြစ်ငယ်များအတွက် ရေနုတ်မြောင်းအဖြစ် အသုံးပြုသော စက်ဝိုင်းပုံ နစ်မြုပ်မှုအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Tollos သည် Castilla y León ဧရိယာတွင် အလွန်အသုံးများပြီး၊ တွင်းများကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းတို့စုဆောင်းထားသောရေများသည် လျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ကျောက်အမျိုးအစားအလိုက် စုပ်ယူကြသည်။
ရွှံ့စေးနှင့် ထုံးကျောက်တို့မှ ဖြစ်ပေါ်လာသော မြုံသောကျောက်များ ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အကျွံတွင်းများသည် မြေဆီလွှာတွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သောကြောင့် ၎င်းသည် calcareous area တွင် တစ်ခုတည်းသော လုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါ။ မိုးရေ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် မြေအောက်ရေဖြစ်လာပြီး ၎င်းကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည့် ဒြပ်ထုနှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ကျောက်ထု၏အောက်သို့ စီးဆင်းသွားသောအခါတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
မိုးရေတွင် လေထုမှ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ပါ၀င်သောကြောင့် ကာဗွန်ဓာတ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်သည် ကျောက်တွင်းရှိ ကယ်လ်စီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ရေနှင့် ကယ်လ်စီယမ်ကာဗွန်နိတ်ကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ရေသည် လိုအပ်သည့် ပမာဏသို့ ရောက်ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ကျောက်တုံးများ အရည်ပျော်ပြီး အနည်ထိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤအရာများသည် sinkholes များဖွဲ့စည်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် karst modeling ၏မူလအစအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ရေနှင့် မြေအောက်ရေသည် ကျောက်တုံးများကို တဖြည်းဖြည်း အရည်ပျော်စေသည်။ ဤနည်းဖြင့် ရေနှစ်ခုကို ဆက်သွယ်ပေးသော ပြခန်းများနှင့် လိုဏ်ဂူများကို ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ကျောက်လွှာများ တဖြည်းဖြည်း ပြိုကျလာခြင်းကြောင့် ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှု နှေးကွေးသွားနိုင်သည် သို့မဟုတ် မြေအောက်လိုဏ်ဂူတစ်ခု ပြိုကျမှုကြောင့် ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ဒုတိယကိစ္စမှာ၊ ၎င်းသည် ထိခိုက်မြေပေါ်ရှိ အဆောက်အအုံများအတွက် ဆိုးရွားသော အန္တရာယ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်ခန့်က၊ ဂွာတီမာလာတွင် ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်စေသော ဤဖြစ်ရပ်များထဲမှတစ်ခု ပေါ်လာခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံခဲ့သော ခံယူချက်နှင့် စိတ်ဆန္ဒအရ နာကျင်ခြင်းများကို အခြေခံ၍ အလျင်စလိုနှင့် မှားယွင်းသော ကောက်ချက်ချမှုများ အမြဲလိုလို ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျရောက်လာသော ကပ်ဘေးများဟုခေါ်သည့် အဆက်မပြတ် ဗုံးကြဲခံနေရပြီး အကြောင်းရင်းများ သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းတရားများသည် ပြောမပြတတ်ပါ။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် တွင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ လက္ခဏာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ဘူမိဗေဒ » တွင်းများ